Sarintany momba ny zanatany coral | Fiaretana haran-dranomasina
Fitaovana fanaraha-maso hanarahana ny fahaveloman'ny zanatany amoron-dranomasina
Ny saritany ambany ambany no fomba fiasa mahatsapa lavitra misy dian-tongotra kely indrindra, na izany aza dia manome ny vahaolana ambony indrindra amin'ny habaka. Mampiasa sary anaty rano izy io, matetika ampiasain'ny snorkelera na ny mpanamory sambokely, ary mifantoka amin'ny faritra kely amin'ny vatohara. Ny fomba fahazoana sary dia mitovy amin'ny ampiasaina amin'ny fanaovana sarintany miaraka amin'ny drone aerial. Ny photogrammetry akaiky dia afaka manoratra fanovana misimisy kokoa amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina sy ny fatiantoka (ohatra ny refy milimetatra), izay fitaovana matanjaka amin'ny fanaraha-maso ireo toerana fivoahana.
Ny fotogrammetry akaiky dia akaiky no ampiasaina miaraka amina teknika antsoina hoe Structure-from-Motion (SfM) hamoronana modely telo refy avo lenta amin'ny firafitry ny vatohara. Ny maodely 3D amin'ny firafitry ny haran-dranomasina dia azo ampiasaina hanaraha-maso ny fiovan'ny tsy fahampian-tsakafo, singa iray manan-danja amin'ny haran-dranomasina ho an'ny trondro miankina amin'ny haran-dranomasina sy ireo zavamiaina mifandray amin'ny haran-dranomasina hafa. Ankoatry ny firafitra, azo arahi-maso ihany koa ny fanovana ny haran-dranomasina velona, ​​ny zava-manan'aina, ny aretina ary ny fiatraikan'ny karazana biby manafika.
Cloud point 3D an'ny Elkhorn Coral (Acropora palmata) noforonina tamin'ny sary stereo an-jatony. Sary © Steve Schill
Ny Nature Conservancy (TNC) dia mitarika an'io asa io any amin'ny US Virgin Islands (USVI) izay anaovan'izy ireo fanadihadiana ny fitomboan'ny zanatany haran-dranomasina nafindra. Vakio ny fandinihana tranga etsy ambany.
Fandalinana tranga: Photogrammetry hanaraha-maso ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina any USVI
Sarintanin'i Karaiba atsimo manasongadina ny Nosy Virgin US. Sary © The Conservancy voajanahary
Ny USVI Coral Innovation Hub, ivon-toerana hampiroboroboana ny fanavaozana ny haran-dranomasina sy ny siansa, hita any St. Croix, dia ao anatin'ny tetikadin'ny Coral Caribbean Coral Strategy miaraka amin'ny tanjona faratampony hamolavolana sy hametrahana vahaolana azo ovaina hanatsarana ny fahasalaman'ny haran-dranomasina ary hampitombo ny tombony azo avy amin'ny haran-dranomasina amin'ny olona sy ny natiora amin'ny toetr'andro miova. Ny USVI Coral Innovation Hub dia misy laboratoara amoron-dranomasina sy laboratoara fikarohana ary koa toeram-pitaizana haran-dranomasina marobe anaty rano izay anaovana fampiharana sy fitsapana ny fomba fanelezana ny haran-dranomasina sy ny firaisana ara-nofo mba hamerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina lehibe. Miaraka amin'ny tanjon'ny fampivelarana ny teknolojia vaovao sy ny fanaraha-maso ny protokol mba hamaritana tsara sy hahomby ny vokatry ny ezaka fiarovana ny haran-dranomasina, ny USVI Coral Innovation Hub dia mampihatra teknika fanaovana fotodrafitrasa hanaraha-maso ireo tetik'asa famerenana amin'ny laoniny ny faritany.
Amin'ny alàlan'ny fakana santionany amin'ireo teboka ara-potoana mialoha, mandritra ary aorian'ny asa fanarenana, ireo mpahay siansa haran-dranomasina TNC ao amin'ny USVI dia manambatra ny fanaraha-maso ny haran-dranomasina mahazatra (ohatra, Atlantika sy ny Gulf Rapid Reef Penilaian ny fanadihadiana momba ny benthos sy ny trondro) miaraka amin'ny teknika fotogrammetrika akaiky akaiky. (izany hoe Structure-from-Motion). Ny tanjona dia ny hanangonana sy hamakafaka matetika ireo vokatra maodely orthomosaic sy nomerika ambonimbony hanaraha-maso ny fanovana eo amin'ny toerana fanarenana sy fanaraha-maso (tsy voaaro) ny haran-dranomasina. Ny maodelin'ny sehatra nomerika, namboarina avy amin'ny sary stereo, dia ahafahana manara-maso ireo fiovana kely amin'ny fitomboan'ny vatohara sy ny fatiantoka, amin'ny refy milimetatra, miorina amin'ny fiovan'ny firafitra telo refy.
Emmanuel Irizarry-Soto dia mandinika haran-dranomasina kintana misy mikrofragidra ao amin'ny akaninjaza. Sary © The Conservancy voajanahary
Amin'ity fampahalalana ity, ny mpahay siansa haran-dranomasina TNC dia afaka manara-maso ny fiovana eo amin'ny haran-dranomasina, toy ny hafahafa (ny fandaminana telo-refy amin'ny firafitry ny haran-dranomasina), ny aretina, ny fitomboan'ny haran-dranomasina ary ny fatiantoka. Ireto data ireto dia ilaina amin'ny fikajiana ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina amin'ny fotoana sy habakabaka ary ahafahana mampitaha ny fanovana ny firafitry ny haran-dranomasina amin'ny toerana haverina amin'ny laoniny sy tsy voarindra. Ny famakafakana ny vokatry ny famerenana amin'ny laoniny ny fahasarotan'ny rafitra sy ny fahazaran-dratsy dia tena ilaina indrindra amin'ny tetik'asa fanarenana ny haran-dranomasina izay mikendry ny hitazona na hanatsara ny haran-dranomasina ho fiarovana ny morontsiraka sy ny toerana ilaina ho an'ny trondro sy ireo zavamiaina mifandraika amin'ny haran-dranomasina.
Ohatra iray avy any Cane Bay, St. Croix, Nosy Virgin US momba ny nanangonana tahirin-kevitra Structure-from-Motion tamin'ny teboka samihafa (Ankavia miankavanana: Aprily ka hatramin'ny Aogositra 2019) dia ahafahan'ny mpandraharaha mahita ny fitomboana mahery vaika sy ny fanovan'ny riaka amin'ny alàlan'ny photomosaic sy maodely ambonimbony nomerika. Ankavia: fambolena mialoha. Afovoany: famoahana aorian'ny famoahana ala. Ankavanana: fanovana fanovana mampiseho fiakarana / fitomboana (mavo) ary fikaohon-tany (mena) aorian'ny fivoahan'ny vatohara. Sary © The Conservancy voajanahary
Ao amin'ny USVI, ity fomba fanaraha-maso sy teknolojia ity dia mitohy hatrany hamolavolana hanomezana izay ilain'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny samihafa. Ohatra, ny fomba fanangonana sary dia ampifanarahana amin'ny masontsivana amin'ny tranokala iray nomena (marivo mifanohitra amin'ny lalina, transects mifanohitra amin'ny teti-dratsy) ary ny algorithma dia miverimberina hahazoana ireo metatra izay ilaina indrindra amin'ny fandrefesana ny fanovana.